China Stainless Steel Rubber Wafer အမျိုးအစား Stainless Steel Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ - Allway Valve
Stainless steel wafer အမျိုးအစား butterfly valve ၏ ပစ္စည်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သံမဏိ အစိတ်အပိုင်းများ ပြုပြင်ခြင်း ၊ နှစ်ဆင့် စက်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း နှင့် နှစ်ကြိမ် စစ်ဆေးခြင်း ဖြင့် ၊ တိကျမှု အမှားအယွင်း ±20mm ကို သေချာ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ၊ စံမြင့် စက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း သည် valve zero-leakage ကို အာမခံပါသည်။ wafer valve stem bearing သည် ကောင်းသော wear နှင့် corrosion resistance ရှိသော "copper sleeve" ကိုအသုံးပြုသည်။
Stainless steel wafer type butterfly valve ၏ရော်ဘာထိုင်ခုံတွင် တည်ငြိမ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တင်းမာမှုနှင့်အတူ ရော်ဘာ 50% ကျော်ပါရှိသည်။ PTFE၊ NBR၊ EPDM၊ FKM စသည်တို့ပါရှိသော အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံရွေးချယ်မှု။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလက်ကိုင်သည် 45#သံမဏိ၊ သံမဏိနှင့် အလူမီနီယံစသည်တို့အတွက် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ရှည်လျားသောဖော်ပြချက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ထိပ်တန်းအရည်အသွေး၊ တန်ဖိုးရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ သာယာဝပြောသောအတွေ့အကြုံနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ contact for China Stainless Steel 304 EPDM Rubber Wafer Type Butterfly Valve , We sincerely hope to serve you and your small business withagreat start. မင်းအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တစ်ခုခု လုပ်နိုင်ရင်၊ ငါတို့ လုပ်ရတာ ကျေနပ်တာထက် အများကြီး ပိုရလိမ့်မယ်။ China Double Flange ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော၊ Butterfly Valve၊ We'vealarge share in global market. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ခိုင်မာသောစီးပွားရေးအင်အားရှိပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော အရောင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောနိုင်ငံများရှိ ဖောက်သည်များနှင့် ရင်းနှီးဖော်ရွေသော၊ သဟဇာတရှိသော စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို အခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှား၊ မြန်မာ၊ အင်ဒီနှင့် အခြား အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများကဲ့သို့၊
သံမဏိ wafer အမျိုးအစား လိပ်ပြာအဆို့ရှင်သည် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျစ်လျစ်သော၊ သေးငယ်သောလည်ပတ်အားကို အသုံးပြုသည်။ လည်ပတ်မှု လျင်မြန်စွာပွင့်လာပြီး အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရေနံ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ အပေါ့စား အထည်အလိပ်၊ စက္ကူနှင့် အခြားရေပေးဝေရေးနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများ၊ စီးဆင်းမှုကို ထိန်းညှိရန်နှင့် မီဒီယာလည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
Stainless steel wafer type butterfly valve ၏ကိုယ်ထည်ပစ္စည်းသည် stainless steel ဖြစ်သင့်သည်၊ disc ၊ stainless steel ၊ bronze စသည်တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုင်ခုံသည် EPDM၊ NBR၊ VITON၊ PTFE စသည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းအား လက်ကိုင်လီဗာ၊ ပိုးကောင်ဂီယာ သို့မဟုတ် တွန်းအားများဖြင့် လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်။
Stainless steel wafer type butterfly valve တွင် မူရင်းဒီဇိုင်း၊ လက်ရာမြောက်သော နည်းပညာ၊ ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ ပါရှိသည်၊ ၎င်းသည် ISO9001 နိုင်ငံတကာ အရည်အသွေးစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရရှိထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် Stainless steel wafer အမျိုးအစား butterfly valve ၏ကြီးမားသောစတော့ရှယ်ယာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ပေးပို့ချိန်သည်တိုတောင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ရထားပို့ဆောင်ခြင်း၊ လေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် အခြားအရာများ။ အာမခံကာလ 12-18 လဖြစ်သင့်သည်။
hot Tags:: Stainless Steel Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valve၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ရောင်းချသူများ၊ လက်ကားဝယ်ယူ၊ စက်ရုံ၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာသော၊ ဈေးနှုန်းသက်သာသော၊ ဈေးနှုန်းစာရင်း၊ ကိုးကားချက်